Ungayithatha kanjani inja emotweni: umthetho, okudingayo nezeluleko | Izinja Umhlaba
Ungayithatha kanjani inja emotweni
I-Encarni Arcoya | | Izesekeli zezinja, Izinja ezijwayelekile
Ukuba nenja akusho ukuthi kufanele ihlale isekhaya, noma enkundleni. Kunezikhathi lapho ungafuna ukuhamba naye uye kwenye indawo, noma kufanele umyise kudokotela wezilwane. Kepha, Ungayithatha kanjani inja emotweni? Ngabe kusemthethweni yini ukwenza njalo? Kungathwalwa ngumuntu oyedwa?
Uma uzibuza ngalesi sihloko, lapho-ke sizozama ukukusiza ukuxazulula konke ukungabaza okungavela ngokuhamba nenja yakho emotweni.
1 Okushiwo umthetho womgwaqo
2 Yini okudingayo ukuthatha inja emotweni ngokuphepha
2.1 Uma uzomhambisa ezihlalweni ezingemuva
2.1.1 Amahhanisi avunyelwe
2.1.2 Ibhande lesihlalo senja
2.1.3 Isihlalo somvikeli
2.2 Uma uzoyithatha esiqwini
2.2.1 Isithiyo sokuhlukanisa
3 Yini okufanele uyenze uma inja yakho iba nesiyezi emotweni?
4 Amanye amathiphu okufanele uwagcine engqondweni lapho uhamba nenja yakho ngemoto
Okushiwo umthetho womgwaqo
rabbitgoo Bophela Inja ...
Into yokuqala okufanele uyazi ukuthi yiTraffic Law, ikakhulukazi Isigaba 18.1 seMithethonqubo Ejwayelekile Yomgwaqo, leyo elawula ukuthi ungayithatha kanjani inja yakho emotweni, kanye nezinye izinhlobo zezilwane ezifuywayo. Ngokuvamile, lo mbhalo uthi kufanele ukwenze ngendlela yokuthi ugcine i "Inkululeko yakho siqu yokuhamba, ushintsho oludingekayo lombono nokunaka unomphela ukushayela". Ngamanye amagama, ungahamba nesilwane sakho inqobo nje uma kungesikho ukuphazamisa noma kukhawulela ukushayela kwakho.
Manje, i-athikili ayinayo akukho ukucaciselwa ngezindlela okufanele uthuthe ngazo inja yakho. Lokho wukuthi, akukutsheli ukuthi kufanele usebenzise othwala, amahanisi, ibhande lesihlalo, njll.
Yini okudingayo ukuthatha inja emotweni ngokuphepha
Ngaphandle kokuthi umthetho awubeki isibopho maqondana nezindlela okufanele uhambe ngazo nenja yakho, kuyiqiniso ukuthi i-DGT (General Directorate of Traffic) ikushicilele izincomo ezithile ukuze uyenze iphephe ngangokunokwenzeka.
Ukuze benze lokhu, bancoma lokho isilwane asikhululekile nganoma yisiphi isikhathi. Futhi abakusho ngoba kungahlasela noma ngasiphi isikhathi umshayeli, noma kuyamcasula, kodwa ngoba, uma kwenzeka ingozi, isilwane sizophonswa futhi impilo yakhe ibe sengozini. Uma futhi ingemuva, umthelela uzoba sezihlalweni zangaphambili, kwenze ukuthi amandla ande futhi kube nomonakalo omkhulu kulabo abangena kulezo zihlalo.
Kungakho, kuya ngokuthi ubeka kuphi, amasistimu okuphepha anconyiwe yile:
Uma uzomhambisa ezihlalweni ezingemuva
Uma kwenzeka uyiphatha ezihlalweni ezingemuva (okujwayelekile), ungayivikela ngalezi zinsimbi ezilandelayo.
I-SlowTon Car Harness ...
I-Eagloo Big Dog Harness ...
Emakethe uzothola izinhlobo ezimbili zokubopha amahhanisi: eyedwa nengwegwe ephindwe kabili.
El Ihanisi lokuhlanganisa elilodwa linanyathiselwa ngebhande lesihlalo. Inkinga enayo ukuthi, uma kwenzeka kuba nomthelela, ibhakede lingagqashuka, lishiye isilwane sikhululekile egumbini, ngakho-ke singazilimaza noma siphambi kwaso.
El amahanisi wokubopha kabili asebenza kangcono, ikakhulukazi uma unesistimu yokuxhuma emfushane kusukela, uma kunengozi, isilwane asikwazanga ukufika ezihlalweni zangaphambili, futhi inja noma umshayeli nomgibeli ngeke balimale ngenxa yomthelela omkhulu.
Manje, noma ngabe uthenga eyodwa noma enye, kubaluleke kakhulu ukuthi kube yihhanisi eligunyaziwe ngoba ngaleyo ndlela uqinisekisa ukuthi lihlolwe nokuthi lihlangabezana nazo zonke izidingo zokuphepha.
Ibhande lesihlalo senja
i-esoLife 2 Belt ...
Ikhava yesihlalo se-Louxmeer...
I-Neuftech iyashintshwa ...
Ibhande lesihlalo senja lingenye yezinhlelo zokuvimbela ukuhamba nenja yakho ngemoto. Lokhu kuboniswa nge Bopha ibhande eliboshelwa ebhande lesihlalo ngendlela yokuthi kubanjwe wonke umzimba wenja.
Ikesi Elimhlophe Lenja ...
I-HoneyGuaridan Ihlanganisa ...
Ikhava yesihlalo seTozezey ...
Le nto iyakhethwa futhi ayisizi ukuphepha kwesilwane. Ikhonza ukuvikela izihlalo ekushiyeni izinwele noma imihuzuko. Kepha akukuncishi ngempela ukuhamba ezihlalweni.
Isiphathi se-morpilot ...
Isikhwama Esiphethe I-BYGD...
Ama-Amazon Basics –...
El othwala kungenye yezindlela zokuhambisa zenja, ngoba izovikelwa futhi futhi uzozizwa uzolile lapho usendaweni esikhawulelwe kakhulu. Manje, uma uzoyithatha, kufanele wazi ukuthi indawo engcono yokuyibeka isephansi kwezihlalo zangemuva. Phakathi kwezihlalo zangaphambili nezingemuva.
Uma kwenzeka ingalingani, ngoba inkulu kakhulu, kuzofanela ukuthi uyithwale ngesiqu. Vele, yibeke endaweni eguqukayo iye ohlangothini lokuhamba, bese uzama ukuyivikela ukuze inganyakazi lapho ukhuphuka amagquma noma ujika.
Kufanele wazi ukuthi azikho izithwali zabo bonke osayizi bezinja, ngakho-ke uma lokhu kukhulu kakhulu, esikhundleni senzuzo, kungaba yisihlungu.
Uma uzoyithatha esiqwini
Lapho inja yakho inkulu, into ejwayelekile ukuthi igcina ngokuhamba ngesiqu semoto. Abanikazi abaningi bakhela kule ndawo uhlobo lwenqola enkulu yohlobo lwehhoko ukuze bakwazi ukuhamba nezilwane ngokuphepha, kepha uma lokhu kungenjalo, sizokunikeza isesekeli ongasisebenzisa.
Sakura SS5259 - Isithiyo ...
I-Trixie, ehlukanisela ...
La ibha yokuhlukanisa, eyaziwa nangokuthi igridi yokuhlukanisa, Ibekwe ohlakeni lwemoto ngendlela yokuthi ibhuthi lihlukaniswe nezihlalo zangemuva. Ngale ndlela, inja ayikwazi ukungena kuleyo ndawo futhi ihlale esiqwini.
Kuyo ingakhululeka yize kungakuhle ukuthi uyibambe ngehhanisi ukukhawulela ukunyakaza kwayo ikakhulukazi ukuphepha kwayo uma kwenzeka ingozi.
Yini okufanele uyenze uma inja yakho iba nesiyezi emotweni?
Kufanele siqale ngokukutshela ukuthi kunezinhlobo ezimbili zezinja: lezo eziba nesiyezi ezimotweni nalezo ezingatholi isiyezi. Uma inja yakho ingeyokuqala, akufanele wethuke, noma ucindezeleke lapho kufanele uhambe nayo ngoba kaningi unezixazululo zokugwema ukungaphatheki kahle kwesilwane sakho ngasikhathi sinye lapho ususa khona ukusihlanza noma ukusibona kabi.
Ngokuvamile, kuthiwa Izinja ezingama-25% zithambekele ekuguleni kwezimoto. Futhi lokho kusho ukuthi, ngemuva kwesiyezi, kuza ukuhlanza, okungaba ngaphakathi kwemoto noma ngaphandle kwaso. Kuzo zonke izinja, imidlwane yiyona engaba nezinkinga eziningi, ikakhulukazi ngoba uhlelo lwayo lokuzwa alukakhuli kahle, okubenza balahlekelwe ibhalansi lapho behamba benganyakazi.
Futhi yini okufanele uyenze lapho? Qaphela:
Hlola nodokotela wezilwane wakho. Uma isiyezi sijwayelekile, ungakhuluma nodokotela wezilwane ukubona ukuthi ayikho yini imishanguzo ezosiza inja yakho ukubekezelela ukuhamba.
Zama ukujwayela. Iqala ngokuvula imoto ukuze ikwazi ukungena noma yinini lapho ithanda khona futhi ibone ukuthi kuyinto eyejwayelekile. Kwesinye isikhathi ukufaka amathoyizi athile noma iphunga lenja kuyasiza ekuzithobeni.
Qala ngohambo olufushane. Ngaphambi kokwenza uhambo olude, udinga ukuthi isilwane sizole, futhi ungabi nesiyezi, noma okungenani usenze sincane. Ngakho-ke, ungayiqala ngohambo olufushane.
Lawula izinga lokushisa. Zama ukweqa ama-degree angama-22 ukuze isilwane sizizwe sikhululekile.
Ungashayeli ngejubane elikhulu.
Amanye amathiphu okufanele uwagcine engqondweni lapho uhamba nenja yakho ngemoto
Sishiya wena Amanye amathiphu angasiza lapho uhamba nenja yakho ngemoto:
Uma inja incane, yibeke esithwalweni. Uma sikhulu, sifake isivikelo sesifuba esinamahuku. Ngale ndlela ngeke zihambe kakhulu.
Zama ukungamniki ukudla ngaphambi kokuthatha uhambo. Eqinisweni, isidlo sokugcina kufanele sibe ngamahora we-3-4 ngaphambi kokuqala uhambo.
Uma ethuka kakhulu futhi engahlali emotweni, buza udokotela wezilwane ukuthi ingabe ikhona yini imithi ongamnika yona.
Zama ukumkhathala ngaphambi kohambo, udlale naye bese uzama ukuchitha amahora ambalwa ukumenza ashise amandla. Ngakho-ke lapho ungena emotweni, ngethemba lokuthi uzokhathala uze ukwazi ukulala.
Yima njalo ukuze isilwane sikwazi ukuzivumelanisa, futhi sizikhulule, siphuze amanzi (hhayi ukudla) futhi sidlale kancane.
Emotweni, zama ukungamthethisi noma uzicindezele ngoba lokho kuzonakwa yinja futhi kuzothinta imizwa yakhe.
Ungasinika amanye amathiphu wokuhamba nenja yakho ngemoto?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Ungayithatha kanjani inja emotweni
Izipikili zezipikili zezinja